7 Hụnanya Na-aga Ebe Niile | Save A Train
Home > Inzọ Njem Italytali > 7 Hụnanya Na-aga Ebe Niile
(Emelitere ikpeazụ On: 07/06/2021)
Site na ụlọ ndị Europe na obodo ochie ochie gaa Hong Kong na-atọ ụtọ, ndị a 7 ịhụnanya ebe n'ụwa ga-eme ka ịhụnanya gị gafee. ndị a 7 ebe ndi mmadu huru n'anya bu ihe zuru oke maka uzo di ebube na akuko ihunanya gi, na iji nwetaghachi anwansi.
1. Kasị ịhụnanya ihunanya ebe Worldwide: Paris
Ọ bụrụ na ị na-achọ otu okwu na ọkọwa okwu maka “ịhụnanya”, ị ga-ahụ Paris sipịa na nnukwu akwụkwọ ozi. Enweghị nkọwa ya, mma n'abalị, patisserie, na ọtụtụ ntụpọ maka ihunanya eserese, mee ka Paris bụrụ otu n’ime 7 ịhụnanya ebe n'ụwa nile.
Na-agagharị na mpaghara mara mma La Marais, na-ege egwu n'okporo ámá, ma ọ bụ inwe picnic na ebe kachasị mma, Paris bụ ezigbo ịhụnanya. Ee, o nwere ike ọ gaghị abịa dị ka ihe ijuanya na Paris bụ isi honiimuunu ebe na Europe, ma ị nwere ike iche na ebe ọ bụla ọ hụrụ n'anya ga-ede akwụkwọ. Otú ọ dị, ọmarịcha obodo a jupụtara na ntụpọ, ebe i nwere ike iti mkpu ịhụnanya gị, ma ọ bụ nwee ọnyà na-enweghị ndị njem nleta. Obi abụọ adịghị ya na Paris bụ obodo ịhụnanya kachasị, maka di na nwunye niile, na agba niile nke egwurugwu.
The kasị ihunanya Ihe Ime na Paris
Gagharịa gburugburu Musee Carnavalet, susuo na Canal Saint-Martin, na-enwe a ihunanya picnic na iconic Champs de Mars ohere.
2. The Best Lovehụnanya Destination Na Italy: Venice
Ezie na Venice bụ otu n'ime ihe ndị kasị touristic obodo na Europe, ị ga-ahụ ọtụtụ ebe zoro ezo, ebee ka ịkekọrịta gelato ma ọ bụ Pizza. Àkwà mmiri nke obodo ga-akpọrọ gị na onye ị hụrụ n'anya gaa n'akụkụ ndị a ga-egbu, alleys, na ụlọ nri dị na mpaghara, ebe iri nri Italian nri, na tost ima mmanya Italian ma ọ bụ Aperol.
Romanticbọchị ihunanya zuru oke na Venice ga-ebido site na ịgagharị ọtụtụ àkwà mmiri. mgbe, ị nwere ike iri pizza maka 2 na gelato. Akwadoro ka ịhapụ nleta na 2 agwaetiti mara mma Burano na Murano, nkera nke abụọ nke ụbọchị, mgbe ìgwè ndị njem nleta lara. Ụzọ a, unu ga-enwe agwaetiti nile, n'ihi na ihunanya eserese.
The kasị ihunanya Ihe Na-eme Na Venice
Gagharịa gburugburu Dorsoduro, agbata obi, ma ọ bụ rie na Cantina Do Spade, ebe Casanova na-eri nri abalị. mgbe, ị nwere ike iri nri ehihie na-atọ ụtọ na agwaetiti Burano na-adọrọ adọrọ, ma nwee obi uto gondola na mgbe anyanwụ dasịrị. Nwere ike ịmalite ezumike ezumike gị na a ihunanya ụgbọ oloko njem site na London ma ọ bụ Switzerland ruo Venice.
3. Desthụnanya ebe Na Europe: Lake Como
Anwụ na-ada n’elu ugwu ndị dị n’elu ugwu, na-egosi n'ime ọdọ, gị na onye ị hụrụ n'anya na-agagharịkwa Ije nke ndị hụrụ, ụzọ nke ndị hụrụ na Varenna. O doro anya na ị ga-ekweta na nke a na-eme Ọdọ Como bụ ebe ịhụnanya na-agaghị echefu echefu maka ihunanya maka 2.
Na mgbakwunye na maa mma obodo Varenna, Bellagio, na Vezio na-enye echiche dị egwu nke Lake Como na ọtụtụ ebe ịhụnanya.
Ọtụtụ ihunanya Ihe Ime na Lake Como
Nwee ọmarịcha njem ije na ugwu Lari ka ị wee nwee ike ịga ije na Monte Crocione. Ọ bụrụ na ị bụ di na nwunye hụrụ adrenaline n'anya, mgbe ahụ a seaplane ụgbọ elu n'elu ọdọ ga-eteta ndị urukurubụba!
4. Ebe Lovehụnanya Na China: Hong Kong
Modern, na-akpali akpali, na-adọrọ mmasị, Hong Kong bụ otu n'ime obodo kachasị nwee ịhụnanya na ụwa. ’Slọ elu obodo, na agwaetiti, enye ịtụnanya echiche tụrụ maka eserese ga-jide ịhụnanya gị. Hong Kong mara mma na ehihie na ọkụ abalị, utịn ye edem usiahautịn, na-enye ọtụtụ ihe omume ịhụnanya, maka a izu ike ezumike abụọ, ma ọ bụ ihe The Epic njem, ịtụkwasị ya n'elu 7 ịhụnanya ebe n'ụwa nile.
Ọtụtụ ihe ịhụnanya na-eme na Hong Kong
Romanticbọchị ihunanya zuru oke ga-amalite site na ịghagharị gburugburu Victoria Harbor, ma ọ bụ picnic na Repulse Bay aja osimiri. N'ehihie, ị pụrụ a onwe nri na klas, ma mechaa bulie iko gị ka ị hụ n'anya mgbe anyanwụ dara.
5. Ebe Lovehụnanya Na-aga n'widewa Niile: Austria
Austria, ala ulo-ikwles, ebube ubi, na obodo ndị mara mma, bụ ebe a ma ama na Europe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanahụ igwe mmadụ, mgbe ahụ Halstatt bụ ebe kachasị mma, na mgbakwunye na ndi ozo magburu onwe ụbọchị njem si Vienna.
Zingtụnanya ọdịdị dị ka Innsbrucker na-enye echiche kachasị mma banyere ugwu na ndagwurugwu Austrian, n'ihi na ihunanya ibugo onu. Na mgbakwunye, obodo mara mma nke oge ochie bụ ebe zuru oke maka akụkọ obi ụtọ-mgbe-akụkọ mgbe ochie. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a ọzọ obodo mepere emepe, mgbe ahụ Vienna zuru oke maka izu ụka ịhụnanya. Ọzọkwa, Vienna bụ otu n'ime ihe kacha LGBT-enyi na enyi ebe n'ụwa, ya mere ọ nabatara ndị di na nwunye niile, n'ọnọdụ ọ bụla mmekọrịta, na na na na na na eche gi na gi significant other.
Ihe kachasị amasị ndị nwoke na nwanyị ime na Austria
Romanticbọchị ihunanya n’Austria ga-amalite site na strọd nke ndị Austrian maka nri ụtụtụ na cafe mpaghara. mgbe, pụọ maka ịgagharị na ogige Austrian ma ọ bụ nnukwu ụlọ. Na mgbakwunye, ma ọ bụrụ na ị bụ a egwuregwu di na nwunye mgbe a ibugo onu ihe na Austrian n'ugwu, ga-adị mma.
6. Hụnanya Na-aga Ebe Niile: Prague
Petit na maa mma, Prague bụ nnọọ ihunanya na n'ụzọ ziri ezi na-ejide ebe anyị 7 ebe kachasị mma n'anya n'ụwa. Ee, o jupụtara na ndị njem nleta, ma enwere ọtụtụ echiche na ogige ntụrụndụ, iji zere ìgwè mmadụ nke ndị njem, ma ka na-enwe kacha mma nke ochie Prague.
Ogwe osisi ndị mara mma, akwa àkwà mmiri, na mpaghara Mala Strana bụ ọnọdụ zuru oke maka ịhụnanya. Mgbe Prague bụ otu n'ime ebe kachasị ewu ewu na Europe, enwere otutu ebe zoro ezo; maa mma Mala Strana agbata obi, na ogige na obodo echiche, Oke mmiri, bụ naanị a ole na ole nke ihunanya nzuzo.
Ihe kachasị mkpa n'anya na Prague
Na-agagharị na Mala Strana, biya n'akụkụ osimiri Vltava, nri abalị na obodo echiche, na mmanya na mmanya Hemingway.
7. Hụnanya Na-aga Ebe Niile: Mpaghara Ọdọ Mmiri Na England
Mgbe otu ebe kpaliri uri ihunanya nke William Woodsworth, mgbe ahụ, ọ bụ ebe kachasị ịhụnanya na-aga. N'ezie, ị ga - ahụ na ala Ọdọ mmiri dị na West England dị oke ịhụnanya. N'ihi 6 ọdịdị bi na ime obodo bekee na odida obodo, na 16 ọdọ mmiri na-egbu ume.
Dị na mpaghara Cumbria, ala ọdọ mmiri bụ otu n’ime mpaghara kachasị mma na England. Ya mere, na-agbago ugwu, gaa ọdọ mmiri na tarn, bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihunanya ihe na-eme n'ụwa. Ọ ga-adị gị ka ị na-abanye na akwụkwọ akụkọ anwansi Jane Austen, ebe ịhụnanya na-egbochi ihe mgbochi niile.
Ebe Kasị Ntanetị Na Cumbria
Ọdọ Mmiri Keswick, maka ije dị ebube ruo njem picnic n'akụkụ ọdọ. Na mgbakwunye, Helvellyn elu, na nsụda mmiri bụ ebe nrọ zuru oke maka mmadụ abụọ.
ndị a 7 ịhụnanya ebe ndị dị egwu ebe ose elu mmekọrịta gị. ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi atụmatụ ịhụnanya gị na ebe ndị a na-atụ nrọ ma na-atọ ụtọ.
You chọrọ Embed anyị blog post “7 Desthụnanya aga Worldwide" jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Flove-destinations-worldwide%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
ebe n'anya DhụnanyaDestances ihunanya IhunanyaEurope agbamakwụkwọEurope